बाबुराम, नारायणकाजी, पशुपतिसमशेर र योगेशको परीक्षा, ३७ सीटमा यी हुन प्रतिस्पर्धी (सूचीसहित) - TV Annapurna
बाबुराम, नारायणकाजी, पशुपतिसमशेर र योगेशको परीक्षा, ३७ सीटमा यी हुन प्रतिस्पर्धी (सूचीसहित)
October 21, 2017 October 22, 2017 Annapurna TV
काठमाडौं । आगामी मंसिर १० मा हुने पहिलो चरणको चुनावका लागि प्रतिनिधिसभातर्फ ३२ जिल्लाका ३७ सीटमा आइतबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ ।
मनोनयन दर्ताको पूर्वसन्ध्यामा प्रमुख दलहरुले उम्मदेवारको सूची तयार पारेका छन् । केही जिल्लामा भने शनिबार रातिसम्म नामावली टुंगो लागेको छैन ।
पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ सीटका लागि आइतबार मनोनयन दर्ता हुनेछ भने प्रदेशसभातर्फ ७४ सीटका लागि मनोनयन दर्ता हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगले भाइटीकाको भोलिपल्टै मनोनयन दर्ताको समय निर्धारण गरेका कारण दलका नेताहरुलाई तिहार मान्नसमेत भ्याई नभ्याई भएको छ । भाइटीका दिनमा समेत दलका नेताहरु टिकट बाँफाँटमा खटिएका छन् ।
एमाले र माओवादी सम्मिलित गठबन्धनले एकाध क्षेत्रको बाहेक सबै उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएका छन् । सिन्धुपाल्चोकमा अझै कुरो मिलिनसकेको एमालेले जनाएको छ । त्यस्तै बाग्लुङमा राष्ट्रिय जनमोर्चासँग प्रदेशस्तरमा तालमेल गर्दा उम्मेदवार टुंगो लगाउन केही ढीलो भएको एमालेले जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारको सूची शनिबार साँझसम्म टुंगो लगाएको बताए पनि औपचारिकरुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । टुंगो लगाउन बाँकी रहेका मध्ये मुस्ताङमा रोमी गौचनलाई टिकट दिइएको कांग्रेस स्रोतले बताएको छ ।
रसुवामा भने नयाँ शक्ति पार्टीले पं्रतिनिधिसभाको सीट मागेकाले ढीलो भएको कांग्रेस स्रोतको भनाइ छ । तर, आइतबार बिहान रसुवामा कांग्रेसको तर्फबाट उम्मदेवार तय गरिने सो पार्टीले जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले गोरखा-२ मा डा. बाबुारम भट्टराईलाई सघाउने भएको छ । त्यसको बदलामा गोरखा १ मा नयाँशक्तिले कांग्रेसका चीनकाजी श्रेष्ठलाई सघाउने छ ।
त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक-२ मा कांग्रेसले राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपतिसमशेर राणालाई सघाउने भएको छ । सिन्धुपाल्चोक १ मा राप्रपाले कांग्रेस उम्मेदवार मोहनबहादुर बस्नेतलाई सघाउने छ ।
कुन-कुन हुन् हटसीट ?
पहिलो चरणको चुनावमा ‘हट सिट’ का रुपमा सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, ताप्लेजुङ रुकुम, रोल्पा, आदिलाई लिन सकिन्छ ।
गोरखा २ मा डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ एउटै क्षेत्रमा चुनाव लड्ने भएकाले त्यहाँ रोचक प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकमा पशुपतिसमशेर राणा र अग्नि सापकोटा ‘हेभी वेट’ का उम्मेदवार भएकाले त्यहाँ पनि रोचक प्रसितस्पर्धा हुनेछ ।
पहिलो चरणमा एमालेका ठूला नेता चुनावी मैदानमा खासै छैनन् । तर, ताप्लेजुङबाट एमाले सचिव योगेश भट्टराईले मनोनयन दर्ता गर्दैछन् । योगेशको निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि हट सिटका रुपमा हेरिएको छ ।
माओवादी नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा रोल्पा र रुकुमबाट लड्दैछन् । तर, उनीहरु सुरक्षित ‘जोन’ मा भएकाले त्यहाँको भीडन्त खासै रोचक हुने देखिँदैन ।
रोल्पामा वर्षमान पुनलाई कांग्रेसका अमर पुनले चुनौती दिनेछन् भने जनार्दन शर्मासँग कांग्रेसका वीरबहादुर ओलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
साना पार्टी के गर्दैछन् ?
उम्मदेवार मनोनयन दर्ता गर्ने अघिल्लो दिनसम्म प्रमुख ३ दलबाहेक अन्य साना पार्टीहरुको खासै चालचुल देखिएको छैन । प्रायः हिमाली जिल्लामा चुनाव हुन लागेकाले मधेसकेन्दि्रत दलहरुले खासै उम्मदेवार चयन गरेका छैनन् ।
अन्य दलहरुले पनि अहिलेसम्म आफ्ना उम्मेदवार सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
हेर्नुहोस् उम्मेदवारहरुको सूची
छक्का पञ्जा २ हेर्नेहरुको जापानमा घुँईचो
चक्रपथ आसपासमा तपाईको घरटहरा छन भने ख्याल गर्नुहोस् तिहार लगत्तै फेरि भत्काईदैछ